बच्चाहरूमा गुलाबी आँखा: अभिभावकहरूको लागि लक्षण र उपचार मार्गनिर्देशन - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, समाचार भारी खेल कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर मनोरञ्जन समुदाय, कम्पनी चेकआउट समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण प्रेस समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर समुदाय
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> बच्चाहरूमा गुलाबी आँखा कसरी व्यवहार गर्ने र बेवास्ता गर्ने
अन्तहीन खोकी र छींक, नाकबाट बग्ने नाक, र अस्पष्ट खारिज बम्पहरू — बच्चाहरू जीवाणुहरूको लागि चुम्बक जस्तो देखिन्छ। हाम्रो अविभावकको बाल्यकालका बिरामीहरूको गाईडमा, हामी लक्षणहरू र उपचारहरूको बारेमा कुरा गर्दछौं जुन सामान्य अवस्थाको लागि हो। यहाँ पूर्ण श्रृंखला पढ्नुहोस्।
गुलाबी आँखा भनेको के हो? | बच्चाहरूमा गुलाबी आँखाका कारणहरू | संक्रामकता | लक्षण | निदान | उपचार | कसरी आँखा ड्रपहरू प्रशासन गर्ने | रोकथाम
जब म डेकेयर प्रदाता थिएँ, एउटा मूर्ख आँखाले मलाई मेरो ट्र्याकमा रोकेको थियो। बच्चाको आँखाको कुनामा रहेको चिपचिपा बन्दूक डरलाग्दाको राम्रो संकेत थियो गुलाबी आँखा Commonए सामान्य (र प्राय: संक्रामक) आँखा संक्रमण, विशेष गरी बच्चाहरूमा। यसको मतलब आमाबाबुलाई फोन कल, परिवारलाई खबरमा राख्ने पत्रहरू, र अक्सर म कुस्ती खेल्ने गर्छु भन्ने ज्ञान उनीहरू कक्षामा फर्कंदा हप्तामा अनिच्छुक बच्चामा जान्छन्। एक अभिभावकको रूपमा, मेरा आफ्नै बच्चाहरूका crસ્ટ आँखा मतलब कामको समय, र उही pint आकार कुश्ती खेल।
शुभ समाचार यो छ, जबकि गुलाबी आँखा एक असुविधाजनक कष्ट हो, यो विरलै गम्भीर हुन्छ र सामान्यतया यो आफैंमा वा उपचारको साथ छिट्टै जान्छ।
गुलाबी आँखा भनेको के हो?
नेत्रश्लेष्मलाशोथ , सामान्यतया गुलाबी आँखा भनेर चिनिने, कन्जेक्टिवाको सूजन हो (आँखाको पलक र आखाको अनुहारको भाग ढाकछ।) गुलाबी आँखाहरू बच्चाहरू र वयस्क दुबैमा सामान्य स्थिति हो। केहि प्रकारका गुलाबी आँखा व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिमा सजिलैसँग फैलिन्छन्, विशेष रूपमा डेकेयर सेन्टरहरू र जस्तै सेटि settingsहरूमा विद्यालयहरु ।
केटाकेटीमा गुलाबी आँखाको कारण हुन्छ?
त्यहाँ छन् बचपनको गुलाबी आँखाको तीन मुख्य प्रकारहरू । प्रत्येकको विभिन्न कारण हुन्छन्।
भाइरल गुलाबी आँखा एडेनोभाइरस र हर्पेस भाइरस जस्ता सामान्य भाइरसको कारणले हुन्छ।
ब्याक्टेरिया गुलाबी आँखा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा, स्टेफिलोकोकस एरियस, र मोराक्सेला जस्ता ब्याक्टेरियाहरूले गर्दा भएको हो। एक बच्चाको गुलाबी आँखा एक ब्याक्टेरिया कारणको कारणले गर्दा E० प्रतिशत, भन्छन् Ashanti वुड्स , MD, बाल्टिमोरमा मर्सी मेडिकल सेन्टरमा बाल रोग विशेषज्ञ।
एलर्जी गुलाबी आँखा (जसलाई इर्यान्टेट कंजक्टिवाइटिस पनि भनिन्छ) मौसमी एलर्जी वा एलर्जीको लक्षण हो (जस्तै पशुको रूखमा), वा पोखरीको पानी जस्ता आँखाको जलनबाट हुने हो।
नवजात शिशु र शिशुहरूमा कन्जेक्टिवाइटिस धेरै गम्भीर हुन सक्छ र तपाईंको बच्चाले उनीहरूको प्रदायकलाई तुरून्त देख्नु पर्दछ।
के गुलाबी आँखा संक्रामक छ?
जे होस् एलर्जी गुलाबी आँखा संक्रामक छैन, भाइरल र ब्याक्टेरिया गुलाबी आँखा हो अत्यधिक संक्रामक र एउटा आँखाबाट अर्को आँखा र मानिसहरू माझ सजिलैसँग फैलियो।
भाइरल गुलाबी आँखा लक्षण देखा पर्नु अघि सामान्यतया संक्रामक हुन्छ, र लक्षणहरूको अवधिसम्म संक्रामक रहन्छ।
ब्याक्टेरिया गुलाबी आँखा संक्रामक हुन थाल्छ जब लक्षण देखा पर्दछ र संक्रामक रहन्छ जब सम्म आँखा डिस्चार्ज उपस्थित हुँदैन, वा २ anti घण्टा सम्म एन्टिबायोटिक सुरु गरेपछि।
बच्चाहरूमा गुलाबी आँखाका लक्षणहरू
गुलाबी आँखाको लक्षण एक वा दुबै आँखामा देखा पर्न सक्छ। लक्षण बच्चाहरू देखि अर्को बच्चामा फरक हुन्छन्, तर समावेश :
पानी आँखा (हरू)
गुलाबी / रातो आँखा (हरू)
सुजिएको पलक (हरू)
सेतो, हरियो, वा पहेंलो डिस्चार्ज (फ्लुइड) आँखा (हरू) बाट आउँदैछ
आँखाको पखेटा वा आँखाको प्वालमा प्वालले पलकहरू विशेष गरी बिहान एकसाथ रहन सक्छ
कानको अगाडि एउटा गांठ
उज्यालो प्रकाशको लागि संवेदनशीलता
आँखामा विदेशी शरीरको संवेदना / केही आँखामा अडी रहन्छ
गुलाबी आँखा सामान्यतया हल्का बिमारी हो र ज्वरोको कारण हुँदैन। यदि गुलाबी आँखो ज्वरोको साथमा छ भने, चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस् किनकि यो संकेत हो कि संक्रमण कन्जाक्टिवा भन्दा बाहिर फैलिएको छ।
गुलाबी आँखाका लक्षणहरू प्रायः स्पष्ट हुन्छन्, तर स्वास्थ्य प्रदायकको भ्रमण गर्नु नै गुलाबी आँखाको प्रकार र उपचारको कोर्स निर्धारण गर्ने एक मात्र तरिका हो।
एक डाक्टरको नियुक्तिमा के अपेक्षा गर्ने
किनकि गुलाबी आँखा अन्य सर्तहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, बच्चाहरूले निदानको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई हेर्नु पर्छ। एक बाल रोग विशेषज्ञ, परिवार चिकित्सक, नर्स चिकित्सक, वा चिकित्सक सहयोगी गुलाबी आँखाको निदान गर्न सक्दछ, तर जटिल अवस्थामा नेत्र रोग विशेषज्ञले उपचार गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
अपोइन्टमेन्टमा, बच्चाको डाक्टरले एक शारीरिक परीक्षा गर्नेछ र बच्चाको लक्षणहरू, सामान्य स्वास्थ्य, र सम्भवत पारिवारिक इतिहासको बारेमा प्रश्नहरू सोध्छ। प्रदायकले चोटपटक वा विदेशी शरीरको निरीक्षण गर्न बच्चाको आँखामा हेर्न विशेष प्रकाश प्रयोग गर्न सक्दछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले आँखा (हरू) बाट आउने स्रावको नमूना स collecting्कलन गरेर ल्याब परीक्षण गर्न छनौट गर्न सक्दछ।
बच्चाहरूमा गुलाबी आँखाको लागि उपचार
गुलाबी आँखा को लागी उपचार कारण मा निर्भर गर्दछ।
भाइरल गुलाबी आँखा उपचार
भाइरल गुलाबी आँखा झुकाउँछ आफैं सफा गर्नुहोस् एक वा तीन हप्तामा, रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरू अनुसार (CDC)। भाइरल आँखा संक्रमण कम्तिमा सात दिन को लागी संक्रामक हो। कहिलेकाँही, एन्टिबायोटिक आई ड्रपहरू माध्यमिक ब्याक्टेरिया संक्रमण रोक्नको लागि सिफारिस गरिन्छ। गम्भीर भाइरल इन्फेक्सनको लागि, जस्तै हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरस (हर्पेस) वा भेरिसेला-जोस्टर भाइरस (चिकन पोक्स) को कारणले हुने मामिलाहरूमा, यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईंको बच्चाको नेत्र रोग विशेषज्ञ वा नेत्र विशेषज्ञले जाँच गरे जुन एन्टिवाइरल औषधि दिन सक्छ।
भाइरल गुलाबी आँखा वा भाइरल कन्जाक्टिवाइटिस सामान्यतया परम्परावादी उपचार गरिन्छ, सोमा मंडल, एमडी, एक बोर्ड प्रमाणित इंटर्निस्ट भन्छन् शिखर सम्मेलन मेडिकल समूह । लालिमा र भीड हटाउन तपाईले [ओभर-द-काउन्टर] आई ड्रप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, भाइरल गुलाबी आँखा दुई हप्ता सम्म रहन सक्छ र अन्य आँखा लक्षण संग साथ हुन सक्छ।
पेट र वाकवाकी को लागी काउन्टर औषधि मा
ब्याक्टेरिया गुलाबी आँखा उपचार
ब्याक्टेरिया गुलाबी आँखा प्राय: दुईदेखि पाँच दिनमा उपचार नगरी सुधार हुन्छ, तर पूर्ण रूपमा टाढा जान दुई हप्ता सम्म लिन सक्दछ। एन्टिबायोटिक ड्रप वा मलहम प्रायः फैलिनबाट जोगाउन, जटिलता कम गर्न र संक्रमणको लम्बाइ कम गर्नका लागि सिफारिश गरिन्छ — विशेष गरी यदि डिस्चार्ज छ भने वा बच्चा प्रतिरक्षा प्रतिरोधात्मक छ भने।
जीवाणु गुलाबी आँखाको उपचार गर्न प्रयोग गरिने सामान्य औषधीहरू समावेश गर्दछ।
औषधि कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Polytrim (polymyxin / trimethoprim) कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
AK-Poly-Bac (bacitracin-polymyxin B) कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Bleph-10 (sulfacetamide सोडियम) कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
टेट्रासाइक्लिन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
युवा (moxifloxacin) कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
सिलोक्सन(सिप्रोफ्लोक्सासिन) कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Ocuflox(ofloxacin) कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
चिब्रोक्सिन (नोरफ्लोक्सासिन) अझै सिक
रोमाइसिन (एरिथ्रोमाइसिन) कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
निर्धारित प्रदायकले यी औषधिहरूको लागि खुराक र उपचार योजनाहरू निर्धारित गर्दछ। जबकि अधिकांश बाल चिकित्सा औषधीहरू वास्तवमा बच्चाको तौलको आधारमा डोज हुन्छन्, आँखाका थोपाहरू परम्परागत रूपमा मानक ड्रपमा र उमेर अनुसार गरिन्छ, डा वुड्स भन्छन्।
बच्चाहरू वा वयस्कहरू बीच औषधी साझेदारी नगर्नुहोस् किनकि यो खतरनाक हुन सक्छ र यसले कीटाणुहरू पनि फैलाउन सक्छ।
Ibuprofen, जस्तो कि बच्चाहरूको सल्लाह वा बच्चाहरूको मोट्रिन , पीडा कम गर्न दिइन्छ। न्यानो कम्प्रेसहरू (सफा वॉशक्लोथ र न्यानो पानी प्रयोग गरेर) आँखामा दिनको केही पटक केही पटक लागू गर्न सकिन्छ लक्षणहरू कम गर्न र क्रिस्चार्ज डिस्चार्ज कम गर्न मद्दत गर्न। प्रत्येक आँखा र अनुप्रयोगहरू बीच बिभिन्न कपडा प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस्। आँखाहरू नलगाउनुहोस् वा स्रावहरू खन्न प्रयत्न गर्नुहोस्।
जबकि काउन्टर आँखा ड्रपहरू (जस्तै कृत्रिम आँसु ) र मलहम उपलब्ध छन्, सँधै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको जाँच गर्नुहोस् बच्चाहरूलाई तिनीहरूको प्रशासन गर्नु अघि। स्वास्थ्य उपचार प्रदायकमा फर्कनुहोस् यदि लक्षणहरू उपचार संग दुई वा तीन दिन भन्दा बढी रहन्छ, वा एक हप्ता उपचार बिना।
एलर्जी गुलाबी आँखा उपचार
एलर्जीको गुलाबी आँखा राम्रोसँग बच्चाको वातावरणबाट चिडचिलो वा एलर्जीन हटाएर उपचार गरिन्छ। एलर्जी औषधिहरू जस्तै एन्टीहिस्टामाइन्स, या त मौखिक वा आँखा ड्रप फारम वा नाक स्टेरॉइड्स (वा संयोजन) वा वास्कोकोनस्ट्रिकर ड्रपहरू (जुन आँखामा सुन्निने रक्त वाहिकाहरू साँघुरो हुन्छ) स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एलर्जीको गुलाबी आँखा लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न सुझाव दिन सक्छ। यी उपचारहरू प्रयोग गर्नु अघि तपाईंको बच्चाको प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
आँखा ड्रप वा मलम कसरी प्रशासन गर्ने
केही बच्चाहरूले आँखा झिम्काउने प्रशासनलाई सहिष्णु गर्दछन् - धेरैले यसको लडाईँ गर्दछन्, विशेष गरी साना बच्चाहरू।
Kidshealth.org एक दिन्छ विस्तृत गाइड बच्चाहरूलाई आँखा औषधि प्रशासन गर्न। आधारभूत चरणहरू:
आफ्नो हात धुनुहोस्।
तपाईंको बच्चाको आँखा सफा गर्नुहोस्।
तपाइँको बच्चा उसको वा उनको पछाडि समतल सतहमा राख्नुहोस्।
तपाइँको बच्चालाई माथितिर र छेउमा भन्नुहोस् ताकि नाकबाट थोपा बहाउँदछ।
तपाईंको प्रशासकीय हातको कलाई तपाईंको बच्चाको निधारमा आराम गर्नुहोस्।
(ड्रपका लागि) आँखाको एक इन्च भित्र ड्रॉपर होल्ड गर्नुहोस् र आँखाको तल्लो भित्री कुनामा अवस्थित अश्रु नलिकादेखि टाढाको पलकमा औषधी खसाल्नुहोस्।
(मलमको लागि) अलि तल र हड्डी तल तान्नुहोस्, आँखाको तलको छालामा, गालाको हड्डीको माथि मात्र। तपाईंको बच्चाको आँखाको एक इन्च भित्र ट्यूब ल्याउनुहोस्, र तलको पलकमा पातलो लेयर लागू गर्नुहोस्
तपाईंको बच्चालाई आँखाभरि औषधि फैलाउन एक मिनेटको लागि आँखा नजिक र पलक लगाउनुहोस्।
अन्य संक्रमित आँखामा दोहोर्याउनुहोस्, यदि आवश्यक छ भने।
कुल्ला वा ड्रप वा ट्यूब मेटाउनुहोस्।
बच्चाहरूमा गुलाबी आँखा कसरी रोक्न सकिन्छ
संक्रामक (भाइरल वा ब्याक्टेरिया) गुलाबी आँखा सामान्य चिसो जस्तै संक्रामक हुन्छ र सामान्यतया श्वासप्रश्वासको स्रावको साथ वा आँखाको साथ सीधा सम्पर्कको माध्यमबाट फैलिन्छ। प्रायः बच्चाहरूले सामान्य सतहहरू स्पर्श गर्दछन् - जस्तै खेलौना, फर्निचर, वा खाना them जसमा श्वासप्रश्वासको थोप्ला वा ब्याक्टेरिया हुन्छन् र त्यसपछि उनीहरूको आँखा छुन्छन् वा रसिन्छन् र तिनीहरूलाई संक्रमण गर्दछन्।
गुलाबी आँखाको रोकथाम राम्रो हात स्वच्छता अभ्यास गरेर सामान्य चिसो रोक्न जस्तै हो: खाना चलाउन अघि हात धुनुहोस्, शौचालय प्रयोग पछि, डायपर परिवर्तन पछि, आँखा, नाक, र मुख छोएपछि) र साधारण वस्तुहरूको सफाई (फोन, टेबुल) , ढोका ह्यान्डलहरू, खेलौनाहरू, बोतलहरू / डिशहरू / कपहरू, कम्बलहरू, कार सिटहरू, क्यारियरहरू, र स्ट्रोलरहरू)। तकिया केसहरू वा तकियाहरू, मेकअप, वा तौलिए जस्तै व्यक्तिगत चीजहरू साझा नगर्नुहोस्।
बच्चाहरूमा गुलाबी आँखाको फैलावट र / वा पुनरावृत्ति रोक्न मद्दतको अन्य उपायहरू:
आईटमहरू धुनुहोस् जुन कसैसँग सम्पर्कमा आउँदछ जसको गुलाबी आँखा छ, जस्तै ओछ्यान र भरिएका पशुहरू।
चश्मा सफा गर्नुहोस् र उनीहरूको केसहरू प्रायः जसो तपाईको बच्चाले लगाउँदछन्।
संक्रमित व्यक्तिको आँखा वरिपरि प्रयोग गरिएका कुनै पनि उत्पादनहरू फ्याँक्नुहोस्, जस्तै मेक-अप, मेक-अप ब्रश, औषधी (एक पटक उपचार समाप्त भए पछि), सम्पर्क लेन्स, सम्पर्क समाधान, र सम्पर्क केसहरू।
साथै, यो महत्त्वपूर्ण घरेलू सम्पर्क हो कि तौलिया, वाशकोलोथहरू, वा आँखा ड्रप वा मलहमहरू साझेदारी गर्दैन। एक पटक बच्चाले गुलाबी आँखाको स shows्केत देखाए पछि, उनी वा अन्य बच्चाहरूबाट टाढा रहनु पर्छ जबसम्म यो समाधान हुँदैन वा उनीहरूलाई चिकित्सा प्रदायकद्वारा खाली गरिएको हुन्छ।
जब तपाईंको बच्चा स्कूल वा बाल हेरचाहमा फर्कन सक्छ
[जब बच्चा स्कूल वा डेकेअरमा फर्कन सक्छ] गुलाबी आँखाको कारणमा निर्भर गर्दछ, डा। मण्डल भन्छन्। भाइरल नेत्रश्लेष्वाशोथ भएका बच्चाहरू दुई हप्तासम्म संक्रामक हुन सक्छ, बच्चालाई सामान्य चिसो लाग्दा जस्तै।
ब्याक्टेरिया कंजक्टिवाइटिस प्राय: उपचारविना समाधान हुन्छ, तर जब एन्टिबायोटिकसँग उपचार गरिन्छ, बच्चाहरू चाँडै स्कूलमा फर्कन सक्दछन्। प्रायः बच्चाहरू ईर्रोपमा सूजन कम गर्न सुरू गरिन्छ, र स्कूल फर्कन सक्दछ जब आँखा अब इन्जेक्सन गरिएको छैन (रातो)। जीवाणु कंजक्टिवाइटिसका बच्चाहरू एन्टिबायोटिक आँखा ड्रप [वा मलम] सुरु गरेको २ 24 घण्टा पछि स्कूलमा फर्कन सक्छन्, डा। मण्डल बताउँछन्। एलर्जिक कन्जेक्टिवाइटिस भएका बच्चाहरू संक्रामक छैनन् र स्कूल वा डेकेयरमा फर्कन सक्छन्।
स्कूल र बाल देखभाल कार्यक्रम कन्जुक्टिवाइटिसको प्रकोपको बारेमा चिन्तित छन्, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको बच्चाको प्रदायकले तपाईंको बच्चा सुरक्षित रूपले फर्कन सक्छ र जब उनीहरूमा संक्रामक प्रकारको गुलाबी आँखा छैन भने निर्दिष्ट गर्न पत्र लेख्नुपर्छ।
र फेरि को सुन्न आवश्यक सबैको लागि, आफ्ना हातहरू बारम्बार धुनुहोस् । त्यो वयस्कहरूको लागि जान्छ र बच्चाहरु।
उत्तम दुखाई राहत क्रीम: जो तपाइँको लागी सही छ?
Carvedilol vs. metoprolol: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Monistat मा सक्रिय संघटक के हो
यो एक म्याद समाप्त भएको इनहेलर को उपयोग गर्न को लागी सुरक्षित छ
कहिले सम्म adderall xr को प्रभाव अन्तिम हुन्छ
कुन भिटामिन डी लिन को लागी राम्रो छ
घरेलु उपचार तपाइँ एक मल त्याग गर्न को लागी